बैंक लिंक गराउनुहोस्, Unlimited कमाउनुहोस्; हरेक रिफरमा रु. ५० - Khalti
by Rownika Shrestha | May 4, 2022 | offers |0comments
बैंक लिंक गरिसकेपछि भुक्तानी सुविधा सहज हुने हुँदा यो सुविधा प्रयोग गर्ने जो-कोहिले एक अर्का लाई लिंक गर्न भनिरहेका हुन्छन्। तर हरेक पटक सुझाव दिंदा आफ्नो Khalti ID दिई Refer गर्दा रु. ५० पनि पाइने भए?
हजुर, Khalti ले ल्याएको Bank Link Refer & Earn Unlimited अफर, जस अन्तर्गत तपाईंले आफ्नो साथीलाई बैंक लिंक गर्न रिफर गरि हरेक रिफरमा पाउनुहुनेछ रू.50 को बोनस। रिफर गर्न तपाईंको KYC verified भए पुग्छ। आफ्ना चिने जानेका साथी, परिवार, आफन्त जो कोहीलाई बैंक लिंक गर्न प्रोत्साहित गरि आजै मनग्य आम्दानी गर्न सुरु गरिहाल्नुहोस।
Referrer: बैंक लिंक गर्न Refer गर्ने व्यक्ति
Referee: आफ्नो बैंकलाई Khalti मा लिङ्क गर्ने व्यक्ति
Referral code : Referrer को Khalti ID
कसरी Refer गराई बैंक लिंक गराउने त?
बैंक लिंक गराउँदा आफ्नो Khalti ID लाई Referral Code को रुपमा राख्न भन्नुहोस्। Referee ले सो कोड राखी आफ्नो पहिलो बैंक लिंक गरिसकेपछि तपाई ले स्वतः रु ५० secondary balance को रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
Referee ले बैंक लिंक कसरी गर्ने ?
Refer गरेपछि Refree ले तल बताइएको तरिका अनुसार Bank Link गर्न सक्नुहुन्छ :
१) Khalti app को Home Screen मा जानुहोस्।
२) Featured services मा रहेको “Link Bank Account” Icon मा ट्याप गर्नुहोस्।
3) ‘Link Bank Now’ मा ट्याप गर्नुहोस्।
4) आफूले link गर्न चाहनु भएको bank छनौट गर्नुहोस र bank details भर्नुहोस्।
३) “Apply referrer Code” मा ट्याप गर्नुहोस् र refferrer को Khalti Id हालनुहोस।
४)’ Submit’ मा ट्याप गर्नुहोस् ।
अब तपाइको बैंक सफलता पूर्वक लिंक भयो भने ; तपाइलाइ bank link refer गर्ने व्यक्तिले (refferrer) रु ५० secondary balance को रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यो अफर 4th May, 2022 to 3rd, June, 2022 (बैशाख २१ देखि जेठ २०, २०७९) सम्म लागु हुनेछ।
Referee ले ‘Apply referrer Code’ मा तपाईंको (referrer) Khalti ID राख्नु पर्नेछ।
यो अफर consumer तथा POS दुबैका लागि लागु हुनेछ।
यो अफर पहिलो बैंक लिङ्क गर्दा मात्र मान्य हुनेछ ।
Referer ले आफ्नो नम्बर Referral Code को रूपमा राखेर आफैंलाई refer गर्न मिल्नेछैन ।
बोनस प्राप्त गर्न Referrer को Khalti ID अनिवार्य रूपमा KYC verified हुनुपर्नेछ।
हरेक रिफरमा Referrer ले रु ५० secondary balance को रूपमा प्राप्त गर्नेछन्।
यस अफर सम्बन्धी कुनै पनि विवाद भएको खण्डमा Khalti को निर्णय अन्तिम हुनेछ।
यस Offer का नियमहरु बिना कुनै पुर्व सुचना बदल्ने, घटाउने वा बढाउने तथा रद्द गर्ने अधिकार Khalti सँग रहन्छ।
अरुको कागजातको दुरुपयोग, गरि, झुक्काई, वा झुट्टा प्रमाणहरु पेश गरी खाता खोलेको भेटिएमा Khalti ले त्यस्ता खाताहरु तुरुन्त निष्क्रिय (ब्लक) गर्नेछ ।
Khalti ले राखेको शर्तहरु भन्दा अरु कुनै किसिमका प्रलोभन वा झुक्याएर refer गर्न पाईने छैन । यसरी झुक्याएर वा प्रलोभनमा परि खाता खोलेकोमा सम्वन्धित व्यक्ति र refer गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछन् ।
अहिले नै आफ्नो ‘खल्ती’ खाता KYC verified गरी आम्दानी गर्नुहोस्।
KYC verified छैन ? अहिले नै आफ्नो ‘खल्ती’ खाता KYC verified गरी बैंक लिंक रिफर गर्न तयार रहनुहोस्।
For more updates about Khalti’s campaign, events, services, and offers, you can also follow us on our official Facebook page, Youtube, Twitter, Viber, Linkedin, and Instagram.